प्रश्न हवाइजहाज सिफारिसहरू
1 वर्ष 10 महिना पहिले - 1 वर्ष 10 महिना पहिले #292 by JanneAir15
नमस्कार! म फेरि एउटा प्रश्न छ। म एक Airbus A380 चाहनुहुन्छ तर (payware र फ्रीवेयर) तिनीहरूलाई थुप्रै छन्। म जो एक म प्राप्त गर्नुपर्छ जान्न चाहनुहुन्छ। यो payware छ वा फ्रीवेयर रूपमा लामो यो राम्रो रूपमा कुरा छैन।
र तपाईं पनि समस्या एक राम्रो विमान छनौट तपाईं त आफ्नो प्रश्न यहाँ पठाउन को लागि छ भने!
म पहिले नै यस पृष्ठमा छ भेटिएन गर्नुभएको छ। तर म अझै पनि त्यो विमान बारेमा एक प्रश्न छ। तपाईं यसलाई अनुकूलन liveries थप्न सक्नुहुन्छ?
Airbus A380-800 कुलपति
अन्तिम सम्पादन: 1 वर्ष 10 महिना पहिले JanneAir15.
1 वर्ष 10 महिना पहिले #293 by Dariussssss
म पनि एउटा प्रयोग छु, र यो सबै छैन। म थप liveries स्थापना गर्न प्रयास गरियो, तर केही कारणले, यो काम थिएन ... शायद म केहि मा गलत थियो।
1 वर्ष 10 महिना पहिले #330 by Gh0stRider203
Dariussssss यस्तो लेखे: म पनि एक प्रयोग छु, र यो सबै छैन। म थप liveries स्थापना गर्न प्रयास गरियो, तर केही कारणले, यो काम थिएन ... शायद म केहि मा गलत थियो।
तपाईं साथै aircraft.cfg फाइल परिमार्जन गर्नुभयो?
1 वर्ष 10 महिना पहिले #332 by Dariussssss
मैले गरे, तर अझै स्थापित livery अप देखाउन थिएन ... किन थाहा छैन।
1 वर्ष 10 महिना पहिले #334 by JanneAir15
म थाहा किन लाग्छ। त्यो विमान FS9 लागि मूल छ। तपाईं विमान लागि सही livery प्राप्त गर्नुभयो? म परियोजना Airbus पृष्ठ माथि देख्यो र (यो पृष्ठमा जस्तै विमान तर यो FSX लागि संशोधित गर्नुपर्छ) FS380 लागि A9 छ त म राम्ररी काम गरिरहेको पनि liveries प्राप्त गर्न के गर्न छ के निश्चित छु। म काम liveries प्राप्त गर्न केही गर्न प्रयास गर्नेछौं र त्यसपछि यहाँ बताउनुहोस्।
1 वर्ष 10 महिना पहिले #338 by Dariussssss
यसलाई अगाडी देख। यहाँ नै, फेरि प्रयास गर्नेछ।
1 वर्ष 10 महिना पहिले #339 by Dariussssss
त्यसैले, तपाईं यसलाई छन्। म एक livery मा '' हाम्रो '' A380 स्थापना गर्न सक्षम थियो र यो काम गर्दछ।
गर्न बाटो यो ... पहिलो, खोज र डाउनलोड तपाईं स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ मात्र A380 बनावट छ। तपाईं Avsim तिनीहरूलाई धेरै पाउन सक्नुहुन्छ। को पीए A380 फोल्डर, खुला र सम्पादन विमान .cfg फाइलमा बनावट फोल्डर राख्नु। कि बनावट आफ्नो सिम उपयुक्त छ, जाँच गर्न यो मामला, FSX मा निश्चित हुनुहोस्।
1 वर्ष 10 महिना पहिले #342 by JanneAir15
ठीक छ, धन्यवाद म प्रयास गर्नेछौं।
1 वर्ष 10 महिना पहिले #343 by Gh0stRider203
JanneAir15 यस्तो लेखे: म थाहा किन लाग्छ। त्यो विमान FS9 लागि मूल छ। तपाईं विमान लागि सही livery प्राप्त गर्नुभयो? म परियोजना Airbus पृष्ठ माथि देख्यो र (यो पृष्ठमा जस्तै विमान तर यो FSX लागि संशोधित गर्नुपर्छ) FS380 लागि A9 छ त म राम्ररी काम गरिरहेको पनि liveries प्राप्त गर्न के गर्न छ के निश्चित छु। म काम liveries प्राप्त गर्न केही गर्न प्रयास गर्नेछौं र त्यसपछि यहाँ बताउनुहोस्।
राम्रो क्याच! म को थिएन lol